Dingana ahafahana mamorona marika tsara amin'ny marika na vokatra | Famoronana an-tserasera
Dingana ahafahana mamorona sary famantarana tsara amin'ny marika na vokatra
Paul gondar | | Graphic Design, maro
Tsy mora ny famolavolana sary orinasa, mila mitadidy zavatra betsaka ao an-tsaina ianao mba hiasa tsara ny sary famantarana. ny dingana hamoronana sary famantarana tsara ho an'ny marika na vokatra dia hanampy anay hahatratra valiny sary izay akaiky kokoa ny vokatra mahomby izy ireo. Tsy tokony hohadinointsika izany sary famantarana no hisolo tena ny zava-drehetra inona ny marika, izy io dia momba ny ampahany hita maso (an'ny ara-batana, raha lazaina) izay haseho an'izao tontolo izao satria izany no ho hitan'ny olona rehefa miresaka ny marika ataonay izy ireo. Tsy maintsy manana anton-javatra hafa isika rehefa mamorona marika, avy aminy Nombre noforonina ao amin'ny fizotran'ny fanomezana anarana mandra- marika hamorona izany rehetra izany tontolo sary izay maneho ny marika. Afaka mahita an'io ianao lahatsoratra raha te hahafantatra mamorona tsara ianao anarana.
Ny logo tsara dia tsy maintsy dinihina tsara ka tratranao ny tanjonao rmaneho ny marika amin'ny fomba mahomby miaraka amin'ny fahaizana voasoratra ao an-tsain'ireo mpampiasa mahita azy, aza hadinoina fa ny logo iray no vao mainka mora mora kokoa ny mahatadidy. Coca-Cola, McDonalds, BMW, ary marika marika marobe hafa dia misongadina fa mora tadidy. Ianaro ny fomba hamoronana marika tena miasa.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatsika momba ny fotoana mamorona sary famantarana tsara es fantaro ny marika anay na vokatra, fantaro hoe toy ny ahoana izany, inona no ataony ary inona ny hevi-dehibe ao aminy. Ilaina izany hahazoana vokatra tsara satria ny logo dia tsy doodle tsotra fa sary iray mampiseho marika iray, noho izany antony izany dia ilaina ny fahalalana ny zavatra rehetra azo atao.
Mahatratra a sary famantarana tsara tsy maintsy ataontsika ao an-tsaina ireto marika kely ireto:
Mampiasà loko vitsivitsy (2-3)
Fantaro hoe aiza no hisy ny marika (tohana)
Ataovy azo averina mamokatra (habe sy haino aman-jery)
Tsy feno entana (tsotra)
Aza mampiasa gradients sy effets
Miaraha miasa miaraka amin'ireo vatan-tsarimihetsika (fandaharana vector)
Tokony ho fantatsika mialoha koa izay tadiavinao misolo tena ny marika anay. Misy endrika fanehoana sary maro samihafa izay samy manana tanjona samihafa, amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny karazana fanehoana sary ny marika misy. Norbert Chavez dia teorista momba an'io lohahevitra io, miaraka amin'ireo masontsivana azontsika atao mamaritra ny marika tsara.
Misy hevitra ankapobeny marobe izay efa zatra manaova sary famantarana tsaraToy ny fitsipika ankapobeny, ireo hevitra ireo dia mirona miasa farafaharatsiny mba hamaritana ny marika amin'ny fomba marina ara-teknika. ny mahay mamaky teny tsara, fampiasana tsara alokaloka mifototra amin'ny psikolojia loko, tsotra… Ary teboka hafa izay ho hitantsika etsy ambany.
1 Hevitra lehibe
1.1 Azo vakiana sy azo vakina
1.2 Sorohy ny typografia an-tanana
1.3 reproducibility amin'ny fanohanana marobe
1.4 Mora tadidiana
Azo vakiana sy azo vakina
Ny logo tsara dia tsy maintsy atao vakiana ary azo ovaina mba hahafantaran'ny mpampiasa izany marika izany ary ho afaka hahatadidy azy handehanany any aoriana. Ao amin'ny sary ambany no ahitantsika sary famantarana iray izay toa somary hita manintona ny masol (azo antoka fa manintona izy) fa tsy ny zava-drehetra no tokony ho ny ampahany manintona fa koa miasa ary manatanteraka ny tanjon'ny marika iray: mampita hafatra dia tadidio. Amin'ity tranga ity dia manana ny marika firafitry ny famakiana sarotra- Be loatra ny loko, singa mifandona, ary ambaratonga typografika izay sarotra vakina. Ny sary dia maneho ny nosy Lanzarote (Nosy Canary) ity famakiana ity dia sarotra satria raha tsy fantatsika io anarana io dia mety ho tonga amin'ny famakiana hafa toa an'i Lanroteza isika. Izy io dia manintona amin'ny endrika ivelany nefa diso fanatanterahana azy. Noho izany, rehefa mamolavola sary famantarana isika dia tsy maintsy mieritreritra fa tsy mahalala ny marika ilay mpampiasa ary noho izany dia tsy maintsy ho mora vakina sy mora azo izy io.
Sorohy ny typografia an-tanana
Ho an'ny iray famakiana marina tsy maintsy sorohy isaky ny afaka mampiasa endritsoratra soratana tanana izahay izay maka tahaka ny soratr'olombelona. Raha marina fa misy marika sasany mampiasa an'ity typeface ity ary miasa izy io, saingy tokony hitandrina isika fa tena mandeha izy io. Araho maso hatrany ny maha-mety azy.
reproducibility amin'ny fanohanana marobe
Rehefa mamorona ny sary fanehoana marika isika dia tsy maintsy fantaro hoe aiza no hisy ny marika, Ny logo ho an'ny APP dia tsy mitovy amin'ny sary famantarana amin'ny sambo. Miova ny fononteny, tsy mitovy ny fitaovana ary miovaova ny famakiana mifototra amin'izany rehetra izany. Ny fahafantarana ny toerana hipetrahan'ny marika dia zava-dehibe satria mety ho tsara tarehy be ny famolavolan'ny efijery saingy rehefa avy nalaina ho any amin'ny mpanohana azy dia very ny tanjany. Ohatra iray hitantsika amin'ny fanavaozana ny sary famantarana ny instagram, ity logo ity dia misongadina amin'ny fampiasana gradient eo anelanelan'ny loko maro, mandeha tsara ny fahitana azy eo amin'ny efijery fa andao hatao hoe vetivety kely dia tokony hosokirina amin'ny takelaka metaly ny instagram. mitovy amin'ny an'ireo tatatra manadio, very tanteraka ilay faritra hita maso nahatonga azy nahagaga. Tokony hahalala foana isika aiza no hipetrahan'ny marika alohan'ny hamoronana ny maha-izy anao sary.
Ohatra tsara iray hafa izay maneho ny hevitra hoe fahalalana aiza no misy ny marika Toy izany ny ampingan'ny fiara. Ireo logo ireo dia tokony ho manintona indrindra an'ity fanohanana ity satria io no toerana tena nampisehoana azy ireo tamin'ny besinimaro. Ny fahafantarana an'io dia tsy maintsy nahasarika ny mari-pamantarana an'ity sary ity.
Ny logo tsara dia tokony ho mora tadidy: sorohy ny enta-mavesatra, tsy fampiasana loko maro ary firafitra tsotra no sasany amin'ireo hevi-dehibe ho mora tadidy. Nike dia ohatra tsara amin'izany, tsotra izy ary mora tadidy.
Mba hahatsiarovana ny sarin'orinasa, ny fahatsoran'ny endrika, mitadiava zavatra izay manintona iray manontolo ary tadidy mora foana. Ny logo Coca-Cola dia be pitsiny raha ny mahazatra azy, fa amin'ny ankapobeny dia mora tadidy izy io noho ny endrika endritsoratra.
Ohatra iray hafa amin'ny a Logo izay tadidy tsara dia ny an'ny Apple miaraka amin'ny paoma malaza ananany ho toy ny sary mampiseho ny marika. Ity orinasa ity dia mampiasa ny paoma ho singa lehibe amin'ny sariny amin'ny fomba izay efa fantatry ny mpampiasa ny firafitry ny kisary, ahafahany afaka manova ny atiny sy mijanona ho azo zahana. Tanteraka izany noho ny anton-javatra fankasitrahana, ny atidohantsika dia mamantatra ny silhouette an'ny paoma ary efa mampifandray azy amin'ny marika na tsy miova na ny famenoana azy.
Sarotra ny famoronana sary famantarana mila be izany fandalinana teo aloha y planning hametraka tolo-kevitra izay tena mandaitra. Fantaro ny marika anay ary izay tianao haleha dia tena ilaina hamoronana sary famantarana tsara. Ny zavatra mety indrindra alohan'ny hananganana sary famantarana dia jereo ny fanovozan-kevitra maro hizaha ny fomba namahan'ny marika hafa an'io olana io ihany. Azonao atao ny mamaky lahatsoratra iray hafa momba ny fomba hamoronana sary famantarana tsara amin'ity rohy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Dingana ahafahana mamorona sary famantarana tsara amin'ny marika na vokatra
Salama, azafady azonao atao ve ny maka ireo efamira ireo amin'ny tiwiter, ianao fantsona, facebook, ary ilay avy amin'ny google clud ..., satria manelingelina izy ireo ary tsy mamela anao hahita na hamaky tsara ny lahatsoratra mahaliana anao. tena manelingelina, misaotra.
Mamaly an'i claudia
Sary nomerika, karazany ary toetra